Dunida oo dhan waxay indhaha ku haysaa kulan madaxeeda lagu wado inuu dalka Singapore ku dhex-maro Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong Un Talaadada nagu soo aadan.
Kulan-madaxeedkaan oo qabsoomi doona 12-ka bishan June ayaa lagu wadaa inuu ka dhoco Hoteelka Shangri-La oo ku yaala Jaziiradda Sentosa ee Koonfurta dalka Singapore oo marti gelinaya shirkan taariikhiga ah.
Kim Jong Un ayaa wuxuu iska sii xaadiriyay maanta oo Axad ah dalka Singapore, sida uu baahiyay TV-ga dowladda, kaasoo soo bandhigay muuqaalka isagoo hogaamiyahan lagu soo dhaweynayo Changi Airport.
Diyaarada laga leeyahay China, gaar ahaan Shirkadda Air China 747 taasi oo saaka kasoo duushay Pyongyang. Kim ayaa la filayaa inuu maanta la kulmo Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Singapore Lee Hsien Loong kahor Kulanka Trump.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa isana lagu wadaa inuu gaaro Singapore saacadaha nagu soo food leh, isagoo kasoo duulay dalka Canada oo uu uga qeybgalay shirka dalalka G7.
Ajandaha ugu wayn ee kulanka Trump iyo Kim ayaa ah Nuk-liyeerka, inkastoo ay jiraan qodoba kale oo labadda hogaamiye ay kawada hadli doonan, sida laga soo xigtay xogheynta labada dhanba.
Lama shaacin mudada uu kulanku socon doono, balse waxaa la fahansan yahay inuu qaadan doono maalmo, waxayna Trump iyo Kim ay balanqaadeen inuu noqon doono shirkooda mid dhaxal gal ah.
-Wafdiga Kim-jong un-
Hogaamiyaha Kuuriyadda Woqooyi ayaa waxaa uu soo kaxeystay illaalo gaar ah, kuwaasoo aanan horey loo arag, waxaana ay yihiin Gandho Gaa-gaaban oo hadana isla siman, waxayna ka kooban yihiin 12 qof.
Sidaasi si lamid ah, waxaa ku jira Wafdigiisa cuno-kariye qaas ah, kaaso u dhashay wadanka Kuuriyada Waqooyi, waxayna ka dhigan tahay in uusan is-ticmaali doonin cunada Hoteelka laga kariyo.
Dowladda China oo ah saaxiibka ugu weyn ee uu gabolka ku leeyahay Kim John-un ayaa ka caawinaysa safarkiisa iyadoo kusoo dartay diyaarado dagaal oo ilaalinayay diyaaradiisa intii hawadeeda uu kusoo jiray.
Kulankan oo noqonaya midkii ugu horeeyay oo labada hogaamiye yeeshaan, ayaanan la ogeyn waxa kasoo bixi doona, maadaama shuruudaha Mareykanka ay kamid yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay ka takhalusto hubkeeda Niyuk-leerka.
Diyaarado dagaal ayaa soo galbiyay diyaaradda uu saarnaa Kim John Un kadib markii...
Caalamka 09.03.2018. 14:04